Iindlela Zine Zokuxolisa Abantu
4 Iindlela Zobungqina Bokufumana Abantu Ukuba Baqhube Pipe Xa Uzama Ukugxila
Sonke sasiye khona - sihleli ngaphandle kwezinto ezimbi kwi Starbucks, ithala leencwadi, okanye nakwiindawo zethu zokuhlala, sifunde ukuvavanya - xa umntu okhukhunileyo ekhwela kwi-cell phone kwaye eqala incoko. Okanye umntwana othile uqala ukuhleka ngokukhawuleza nomnye umntu etafileni ecaleni kwilayibrari. Ingaba wenza ntoni? Ngaba uyayihoxisa indlela yokuziphatha, nangona uphuphaphule amehlo evela kubathengi kuyo yonke indawo? Ngaba uzama ukungayihoyi, uphume kwii-earbuds uze uhambe ngosuku lwakho? Mhlawumbi hayi. Nazi iindlela ezine ezihloniphekileyo zokubangela abantu ukuba batshayele phantsi xa uzama ukugxila kwindawo kawonkewonke.
Getty Images | Matt Jeacock
Indlela efihlakeleyo yokucela umntu ukuba ahlabe umgca phantsi ngokuvuma ifowuni, kwaye ukuvakalisa ukuba unokuphucula ngaphandle / kwenye indawo ukuze ungaphazamise wonke umntu. " Zama ukuthatha iso lathethi ngokufutshane, ngendlela engasongelayo xa uthetha oku. Emva koko, uhambele kwindawo efihliweyo.
Okanye, ukuba umntu uzama ukukubandakanya ngentetho ephakamileyo, cebisa ukuba "uye kwenye indawo ukuze ungakhathazeki wonk 'ubani ojikelezile." Mhlawumbi oku kuya kukwanela kwindlela yokuthulisa ingxolo.
Ukuba oko akusebenzi ...
Ngamanye amaxesha, ukumomotheka kunokuphazamisa intetho enkulu ngokukhawuleza, ngokuzithoba, nangempumelelo. Ngokuqhelekileyo, abantu abakwazi ukuba baxhalabile, ngoko kubamba isohlo kunye nokumomotheka kwinqanaba labo kunokubalumkisa ukuba uyayiva, kwaye ukuba mhlawumbi uyayiva, ke wonke umntu ekamelweni angayiva. Mhlawumbi, baya kuguqula umthamo wabo. Ngaphezu koko, ekubeni ukumomotheka kungenjalo kunomsindo, umntu unokumomotheka ngezimvu.
Ngamanye amaxesha, ubuqhetseba abuzukukude kakhulu, ingakumbi ukuba uthetha inxaxheba kwingxoxo. Ngoko, kutheni ungasebenzisi ii-bucks ezimbalwa zomhla wakho (olo lu vavanyo oluninzi olukhethiweyo ngaphandle kokunjalo), kwaye umyalelo wakhe ngekhofi / i-lemonade / uzalise i-sly. Xa umyalelo uvela, cela i-barista ukuba akayi kukunceda yona, kunye neenkompozo zakho kunye nesicelo: ibhobho phantsi. Xa umntu othetha naye ekhangelelana kwaye uyamomotheka (uphakamisa amehlo abo, nantoni), nikela isilwanyana kunye nesiphuzo sakho kwaye ujonge indawo yakho encinane. Uninzi lwabantu luya kutshitshiswa ekuthuleni ngocwangco lwakho nobubele.
Getty Images | Andrew Rich
Akwenzeki ukuba uphumelele ukuya kumntu kwaye uphelele ukucela ukuba athule. Akukho. Kodwa oko akuthethi ukuba ufanele uphulaphule i-prattle yabo engapheliyo. Ungatsho into ethile kumntu ophakamileyo, ngokungakhathaliseki ukuba uthetha la magama alandelayo, nala magama alandelayo kuphela. Ngelizwi elixolisayo lelizwi kunye nokuthobeka komzimba, uthi, "Unokuthi ungamcaphukisa ngenxa yokuthetha oku, kodwa ndinenkxalabo ejolise kum msebenzi wam." Emva koko umomotheka, uyamncoma.
Iengqondo, le ndlela iyilungileyo! Ngokunika umnini imvume ukuba "ahluthe" kwaye ngoko, ukubeka kwindawo ekhuselekileyo (umntu ofuna ukuba ngummkeli womsindo), ngokukhawuleza wenze ukuba umntu oqhelekileyo, onengqiqo azame ukulungisa impendulo yokuqala kuba akukho mntu ufuna ukukhaba umntu ongekho phantsi (kwaye ngokuqinisekileyo wayekho, ngenxa yezakhono zakho zobungqiqo.) Ngokuzibeka kwindawo leyo, ufumana inzuzo ngokubenza bahlale behleli ngoxolo, bengasongeli.
Ukuba akukho nto isebenza ...
Getty Images | UPaul Bradbury
Ngamanye amaxesha, abantu baya kukhwaza. Abazali babonisa abantwana, abathanda ukuba nexesha elifanelekileyo. Umqeqeshi unikela abafundi bakhe umboniso ophezulu kakhulu kwiFizikiki. Iqela lidibanisa ukuxoxa ngeentsuku zabo. Ukuba unenkathazo ekugxileni, phinda kwi-earbuds, mamela i-app yerhubhe emhlophe, kunye nommandla. Ukuba oko akusebenzi, ngoko ulungele ukuhamba kwenye indawo yokufunda !
Intshayelelo yeShakespearean Sonnets
Iyintoni intsingiselo yenyanga entsha?
Doane College - Crete Admissions
Izicelo zokugqibela zeeKholeji eziPhezulu neeYunivesithi
Indlela yokujoyina i-PBA Tour